Madaxweynaha Puntland waa Madax dhul la dhac hadba Gidaar isku qaada. | raascasayrmedia.com
← War Degdeg ah:Isku dhac ka dhacay degmada baargaal
Doorashooyinki wadanka Ingiriiska oo aan xisbina helin codka aqlabiyada →
May 7, 2010 · 1:25 am
Madaxweynaha Puntland waa Madax dhul la dhac hadba Gidaar isku qaada.
Waxay Soomaalida ku maahmaahdaa War la hel yaaba Talo la hel , Nin aan War hayn Talo ma hayo waa Xikmadaha Soomaalida ee dhaxalgalka ah waayo waxaa looga baahan yahay marka Nin masuul sare noqonayaa oo Dal iyo Dad la doonayo inuu u taliyo waa Dulqaad iyo Midnimo Ummadda uu hoagaminayo ka sameeyo. Madaxweynaha Puntland wuxuu iminka marayaa halkii ugu sareysay, maxaa yeelay wuxuu ka hor noo sheegay in dhibaatada ugu weyn ee Puntland ka jirtaa ay tahay hay’adda Sirdoonka Puntland oo haddii wax laga qabto xaalada ay hagaagayso. wuxuu kaloo tilmaamay in waxa dhibaatada iyo dilalka qaraxyada wataa ka dambeeya ay yihiin dadka soo barakacay ee Boqolaalka kun kor u dhaafay.
Waxaan wada xasuusanaa hadda ka hor in Magaalada Boosaaso Dowladda ay ku fasaxday shacabka dadka soo barakacay oo ay ku amartay in la iska saaro. dhamaan hadalada Jahawareersan ee Madax dhul la dhaca waa kuwo aan qiyaas laheyn, waxaa aad loou xantaa Madaxweynaha Puntland in uu yahay Nin cid walba oo aan wadin danaha shacabka Puntland ku shubaan warar aan jirin oo uu sidaas ku go’aan qaato.
Dhibaatada ugu weyn ee haystaa waa kooxaha ku hareeraysan Madaxweyanaha oo ah kuwo Lacag jecel oo aad looga yaqaano Puntland, Aaran jaan waxa ay ku faantaa in ay aheyd maskaxdii ka dambeysay curinta in uu Madaxweyne Noqdo, taasina ay u sahlayso majaraha in ay u hayan weligood inta y ka gaarayaan danahooda fog. Qaar bada oo ka mid ah Aaran-jaan waa kooxihii ugu horeeyey ee Ururkii Al-Itaxaad ee Dagaalka ba’an ka riday 1991-kii Gobolada Waqooyi Bari la oran jiray ee Puntland. Waxa ay iminka bartilmaameedsanayaan dhamaan wixii ka soo shaqeeyey horay Puntland oo ay ku hayaan sidii dalka looga saari lahaa, waayo waa caqabad weyn oo shacabka weli xiriir qoto dheer la leh dadka horay u soo shaqeeyey ee xeeladahooda waxka yaqaan.
Puntland waxa ay hadda ku dul joogtaa gebi labada dhinac boholo dhaa dheer kaga wareegsan yihiin, amaanka iyo nabad lagu soo dabaalanaa waa mid ku xiran iyadoo la helo Maamul hal Cadow leh iyo shacab raali ka ah Madaxda Talada haysaa oo ka turjuma Rabitaankooda Siyaasadeed. Waxaa weli jira khilaaf Madaxweynaha iyo waxgaradka guud ee Puntland mana muuqdo xal arintan Dowladda ka gaarikarto inta Aaran-jaan majaraha u hayso Madaxweynaha Puntland.
Waxaa haddaba isweydiin mudan Dowladda ku eedeynaysaa dadka in ay laayaan dadka soo barakacay miyeysan laheyn Nabadsugid iyo Ciidamo Amaanka kuwa waxyeelada ku hayaa ka hortagta sidii Puntlnd horay loogu yaqaanay, mise waa mala awaal iyo tuhun waxa ay go’aanka ku qaadanayso oo dadka masakiinta ah ee xabadaha ka soo cararay dusha eeda uga saarayso.
Madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa sadex inuu yeelo waa tan hore inuu Dalka uu Madaxweynaha ka yahay Nabadgelyo ku soo dabaalo, mida xigta oo ah talo wadaag ummadda inteeda wax u oolka ah inuu ogolaado oo uusan noqon anigaa iri iyo wiilasha aan wato baa ii ah awood. mida ugu dambeysa oo ah inuu isaga tago haddii uusan ku filnaankarin hanashada Hogaaminta Bulsho weynta Puntland ee kala duwan una baahan dabeecad iyo dulqaad in lagu wado.
Waxyaabaha layaabka leh waxa weeye kuwo Xafiiskiisa ka shaqeeya ee la heebta hoose waxa ay rumaysan yihiin haddii wax laga sheego ama runta farta loogu fiiqo in Xoolo ay leeyihiin oo Xeradooda ka soo foofay laga didiyey, umaba arkaan Danaha Gudd ee Puntland inuu yahay mid Dadka u wada dhashay ka dhaxeeya. wixii horay looga waayey shacabka Puntland miyaa hadda laga helayaa waa isu dowladeen aan ku dhisneyn aan ku dhisneyn rabitaan wadareed. Laascaano waa dibad wareeg maqan, waxaa halis ku jira Sanaag oo iyana cabsi weyni laga qabaa in Gacanta Maamulka C/raxmaan Faroole ka baxdo Gobolada Bari, iyo Mudug cago badan kuma taagna Amaankooda waana Siyaasad xumada hogaanka Majaraha u hayaa Ummadda Puntland
Gabagabadii hadaan hadalka ku soo meero waa arrin fudud in amaanka Puntland hagaago, waxa ayna ku xiran tahay Siyaasadda guud ee qar iska xoornimada Madaxda Sare oo ay ku saleeyaan mid degan oo raaligelisa Shacabka Guud ee Puntland.
Maxamed Salaad Axmed